के कोरोनाको खतरनाक भेरियन्ट ‘नियोकोभ’ फैलिँदैछ ? - Himali Patrika	के कोरोनाको खतरनाक भेरियन्ट ‘नियोकोभ’ फैलिँदैछ ? - Himali Patrika
के कोरोनाको खतरनाक भेरियन्ट ‘नियोकोभ’ फैलिँदैछ ?
काठमाडौं । केही वर्षयता कोरोना भाइरसले सर्वत्र सन्त्रास फैलाइरहेको छ । विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको कोरोना संक्रमणले लाखौंको ज्यान लियो । यसले कतिपयलाई अस्पतालको शैयामा पुर्‍यायो भने कतिपयलाई शारीरिक र मानसिक रुपमा शिथिल बनाइदियो । कोरोना संक्रमण बढ्दै जाँदा विश्वकै जनजीवन प्रभावित बन्यो ।
यतिबेला कोरोनाको ओमिक्रोन भेरियन्टले विश्वलाई त्रसित बनाइरहेको छ । यो आतंक मत्थर हुन पाएकै छैन, कोरोनाकै अर्को भेरियन्ट ‘नियोकोभ’ फैलिने जोखिम रहेको चर्चा हुन थालेको छ । चिनियाँ वैज्ञानिकहरुले उक्त खतरनाक भेरियन्ट फैलनसक्ने भन्दै सर्तक रहन सुझाव समेत दिएका छन् ।
चीनको वुहानका वैज्ञानिकहरुले नयाँ भरियन्ट ‘नियोकोभ’ तुलनात्मक रुपमा निकै खतरनाक भएको दाबी गरेका छन् । यसको संक्रमण हुनेमध्ये तीनमा एक जनाको मृत्यु हुनसक्ने उनीहरुले चेतावनी दिएका छन् । वैज्ञानिकका अनुसार कोरोनाको यो भेरियन्ट दक्षिण अफ्रिकामा पत्ता लागेको हो । हुन त, अहिलेसम्म यो भाइरसको संक्रमण मान्छेमा देखिएको छैन । यद्यपि चमेरोमा भने यो भाइरस देखिएको छ ।
वुहान विश्वविद्यालय र चाइना एकेडेमी अफ साइन्सेसका वैज्ञानिक र शोधकर्ताले नियोकोभ भाइरसबारे चेतावनी दिएका हुन् । वैज्ञानिकका अनुसार कोरोनाको नयाँ भेरियन्ट नियोकोभले मानिसलाई संक्रमित बनाउन केवल एक म्युटेसन भए पुग्छ । चीनका वैज्ञानिकले चेतावनी दिएसँगै रुसका सरकारी भाइरोलोजी शोध केन्द्रले पनि यस विषयमा आफ्नो धारणा राखेको छ । रुसका सरकारी भायरोलोजी शोध केन्द्रका अनुसार चीनका वैज्ञानिकले जारी गरेको आँकडा अनुसार उक्त भेरियन्ट अहिलेसम्म मान्छेलाई संक्रमित गर्न सक्षम छैन । उनीहरुले यसको जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै थप खोज अनुसन्धानको जरुरी छ ।